I-chorion yi ... Ukuhlelwa kwe-chorion. Isethulo se-chorion
Phakathi nesikhathi sokubeletha, umzimba wesifazane uthola izinguquko eziningi. Baqala ngokushintsha emlandweni we-hormonal. Khona-ke izinguquko zenzeka engxenyeni yokulala kakhulu. Phakathi nalesi sikhathi lona wesifazane akasoze asolise ngesimo sakhe esisha. Kulesi sihloko sizokhuluma ngegama elithi "chorion". Uzofunda ngalokho okuyiyo futhi lapho imfundo itholakala khona. Futhi ungazijwayeza izinkinga ezingase zivele nge-chorion.
Ukuqala kuso kuyadingeka ukusho amagama ambalwa ngokukhulelwa. Owesifazane onempilo uphula follicle kanye ngenyanga. Ngalesi sikhathi, i-gamete ye-female iphuma, ilungele ukukhulelwa.
Uma ngalesosikhathi isenzo socansi senziwa, amangqamuzana wesilisa azokwazi ukuhlangana ngokukhululekile neqanda. Lapho ama-gametes amabili ehlangene, ukuhlukaniswa okuqhubekayo nokuhamba kwamaseli kuqala. Uma ukubunjwa kufinyelela esithombeni socansi, iqanda le-fetal linamathele. Ikhula kakhulu ngaphakathi kwegobolondo langaphakathi lesisu bese ihlala khona isikhathi eside.
I-chorion yi-envelope yangaphandle ye-fetus ye-embryo. Kumele kuqashelwe ukuthi iqanda lokubeletha liqukethe izingxenye ezimbili ezibalulekile: i-amnion ne-chorion.
Ingxenye yangaphandle (i-chorion) yingxenye ebaluleke kunazo zonke. Ihlukaniswe yigobolondo elingaphakathi lesibeletho. Ukuhlelwa kwendawo ye-chorion kungaba okuhlukile. Uzofunda kabanzi mayelana nezithandwa kakhulu.
I-chorion iyisici sokukhulelwa okuvamile. Ngaphandle kwalo, izithelo azikwazi ukukhula ngendlela evamile futhi zizophela. Kubonakala lokhu igobolondo cishe ngesonto elilodwa emva kokukhulelwa futhi lihlala kuze kuvele ukwakheka kwe-placenta. Odokotela abaningi bathi i-chorion yi-placenta. Ngokwezinga elithile le nkulumo iqinisile. Kuhlangothini lwegobolondo elingenhla le-fetus ne-endometrium lapho kwakhiwa khona i-placenta.
Lokhu kwakheka akukwazi ukunqunywa ukuhlolwa kwesifazane. I-chorion imfundo engabonakala kuphela ngokuhlolwa kwe-ultrasound. Ngaso sonke isikhathi ku-protocol ye-ultrasound isazi sichaza isimo sesakhiwo esinikeziwe, indawo yaso nezici.
Imithi iyayazi izinhlobo eziningana zegobolondo elingenhla leqanda le-fetal. Kubalulekile ukuphawula ukuthi konke kuxhomeke eminyakeni yobudala futhi kungahluka kakhulu ngokuhamba kwesikhathi. Uhlobo lwe-chorion lungathathwa kuphela ngokuhlolwa kwe-ultrasound.
Isikhathi sokubeletha singama-6 amasonto kusukela ekukhulelwe
Kulesi sigaba sokuthuthukiswa kweqanda lesisu, i-chorion ibonakala ibhekile. Kuyini?
Uma kuhlolwa nge- transducer ye-ultrasound , iqanda lomntwana lingatholakala. Kufanele kuqaphele ukuthi umbungu ngalesi sikhathi awubonakali. I-membrane engenhla yeqanda le-fetal ihlanganiswe ne-endometrium kuyo yonke indawo yayo. Kulolu cala ukuthi kungashiwo ukuthi kunomdwebo ohlotshiswe ngendandatho.
Isikhathi sokubeletha singama-8 amasonto kusukela ekukhulelwe
Ngokuvamile kule protocol yokuhlolwa kwe-ultrasound, abesifazane bathola ukurekhoda: "I-chorion ye-circulatory". Kusho ukuthini lokhu?
Isimo esifanayo somlenze wesisu esingenhla yisici sokukhulelwa kokuqala. Lolu hlobo lwemfundo luguqulwa cishe amasonto angu-8 kusukela ngesikhathi sokukhulelwa.
Lolu hlobo lwegobolondo luyinto evamile ngokuphelele. Abesifazane abaningi babuza umjozi wezifo: "I-chorion yama-nasal: kuyini?"
Igobolondo lathola igama layo ngoba libizwa nge-villi. Kungenxa ngosizo lwabo ukuthi luhlanganiswe nodonga lwangaphakathi lwesitho socansi. I-chorion yamazinyo ihlale ichazwe ku-protocol ye-ultrasound. Ibuye ibonise indawo yendawo yayo.
Indawo yangakini ye-chorion
Kunezinketho eziningi ezijwayelekile zokuhlanganisa lesi sakhiwo. Odokotela abasazi ukuthi kungani iqanda lesisu likhetha indawo ethile. Sizozibona ngazo zonke izindlela.
Lesi simo sivame kakhulu. Ezimweni eziningi, ku-trimester yokuqala yokukhulelwa, i-chorion itholakala edongeni elimisiwe legciwane lesisu. Kulesi simo, kubalulekile ukucabangela izici zokwakhiwa kwalesi sigobolondo.
Uma i-chorion yakho edongeni elingemuva lingatholakali, lihlanganiswe ngaphambili kwesibeletho. Lesi simo futhi siyisimiso, kodwa ukunakekelwa okukhethekile kufanele kuthathwe.
Ngendawo yasendaweni yangaphakathi, kunengozi yokuthunjwa kwezingqimba zesisu. Uma ulandela yonke imiyalelo kadokotela, cishe uzogwema izinkinga ezinjalo. Ungethuki uma uthola lolu lwazi. I-Chorion iyakwazi ukuhambisa nokufuduka.
I-chorion ngesikhathi sokukhulelwa ingaba ohlangothini. Lesi sikhundla sihlale sincishiswe ngaphambili noma ngemuva. Lokhu kubonisa ukuthi i-chorion itholakala, isibonelo, ngaphambili nangakwesokudla.
Abesifazane abaningi abakhulelwe kumele babhekane nalesi sifo. Ukuze uqale ngakho kuyadingeka ukuthola ukuthi "isethulo" sisho ukuthini.
Uma iqanda lokubeletha linamathele phansi esithombeni sofuzo, umphumela ozoholela uzoba nomsele womlomo wesibeletho noma umane ubekwe eduze kakhulu nokuphuma esibelethweni. Lesi simo sisifo, kodwa ukwelashwa kuso akukakhiwa.
Ungathukutheli ngenxa yalolu lungiselelo lwe-chorion. Angakwazi ukuthuthela. I-placenta ephumela kungase iqhubekele phezulu noma eceleni. Ngakho-ke, i-placenta previa, eyabonakaliswa ngesikhathi sokuhlolwa kwesibili, ivame ukunyamalala phakathi nokuhlolwa kwesithathu yi-transducer ye-ultrasound.
Yini engasongelwa ngethulo le-chorion?
Lesi simo ezimweni eziningi sidlula ngokuzimela. Kodwa-ke, kunesigaba sabesifazane abanoboya babo kanye nama-placenta abahlala endaweni yabo futhi abahambisani nomaphi. Kunalokho kuphelile?
Ngalo mphumela, ama-medics angakhetha ukulethwa okungavamile. Uma i-placenta igwema ngokuphelele ukungena kwesibeletho, khona-ke isigaba sokulondoloza esilungiselelwe senziwa . Uma kwenzeka i-chorion (i-placenta) iphansi, udokotela ucabangela ibanga phakathi komsele womlomo wesibeletho kanye nomkhawulo wendwangu. Uma igebe phakathi komlomo wesibeletho kanye ne-placenta lingaphezu kwamamentimitha amahlanu, owesifazane uvumelekile ukuba abelethe yodwa. Ezimweni ezisele, i-ultrasound eyengeziwe ehleliwe yenziwa izinsuku eziningana ngaphambi kokuzalwa futhi, uma kunesidingo, isigaba se-cearean sinqunywe.
Ukuhlelwa kwe-chorion: izinyathelo zokuqapha
Uma utholakala, udokotela uzonikeza izincomo eziningana. Kuyafaneleka ukulalela iseluleko nokugcina zonke izinyathelo zokuqapha. Uma kungenjalo, ukuphuma kwegazi kungazenzeki, okuholela emiphumeleni engalindelekile.
Ukuhlonipha ukuphumula ngokomzimba
Ekubonisweni kwe-chorion, ukuphumula okuphelele ngokomzimba kuhlale kunqunywe. Owesifazane kufanele alahle imfundo yezemvelo nokuzivocavoca kwezemidlalo. Futhi, awukwazi ukuphakamisa izinto ezinzima futhi wenze ukunyakaza okungazelelwe.
Kwezinye izimo, ngisho noma kunqatshelwe ukunyundela, njengoba ukuvinjelwa okubukhali kwesibeletho kungaholela ekuthunjweni okuyingxenye ye-chorion.
Ngaphezu kokuphumula ngokomzimba, ukulala ngokobulili kuyadingeka. Kubalulekile ukushiya bonke othintana nabo kuze kube yilapho i-chorion ikhuphukela endaweni ephephile esuka emgodini wesibeletho somlomo wesibeletho. Uma kungenjalo, ukuphazamiseka okungazibandakanyi kwezitho zangasese kungabangela ukuphuma kwegazi.
Ngesethulo se-chorion, udokotela angase anikeze imithi ethile. Bakhululeka imisipha ye-uterine futhi bangavumeli ukuthi ivumelane. Ekuqaleni kokukhulelwa, kungaba amaphilisi "Dyufaston", i-suppository rectal "Papaverin", amaphilisi "No-Shpa". Ngosuku oluthile lokuthuthukiswa kombungu, ezinye izindlela zingase zibekwe: izijovo noma amaphilisi "Ginepral", amavithamini "Magnelis B6".
Kufanele kuqaphele ukuthi kuyadingeka ukuthatha imithi enjalo kuphela kwiseluleko sikadokotela. Kwezinye izimo, ungenza ngaphandle kwabo. Futhi udokotela angancoma ukuthi agqoke ibhande. Le divayisi izosekela isisu futhi ihlinzekele isimo sonke sowesifazane okhulelwe.
Ngesikhathi umntwana esalindele owesifazane, izifundo ezihlukahlukene ziyaqhubeka. Kufaka i-ultrasound. Ngenhlolovo enjalo, udokotela uhlolisisa njalo i-chorion futhi ekhombisa indawo yayo. Lokhu kubheka ubukhulu begobolondo, ukutholakala kwezendlalelo nezinye izinkinga.
Uma isethulo se-chorion, njalo ulandela iseluleko sikadokotela. Kule ndaba kuphela ukukhulelwa kuzophela ngokulethwa okuphumelelayo.
I-gastroscopy yesisu. Indlela yokwenza i-gastroscopy yesisu. Ukulungiselela kahle isisu esiswini se-gastroscopy
I-Donormil no-alcohol akuhambisani
Inani lokubhekisela. Kuyini lokhu?
I-MRI: ukuphikisana nenqubo
Izindlela ezilula zabantu ezimpompi
Yeka ukuthi awukwazi yini ukumanzisa i-Mantoux: izinkolelo nezingokoqobo
Yekuchumana sendlela yokwenza esangweni e "Maynkraft"
Izimpawu Elihle isidlaliso hhayi kuphela
Sándor Clegane. Lo mlingisi, ababedlala Inja ku "Game of Thrones"
The best Christmas movie umndeni yokubuka (uhlu). Top Christmas Ama-movie
Indlela yokwenza okuzenzela sokukhanda UKWAKHA?
Isibhamu Obungapheli Makarov, ngebuhle nebubi
Compote of amabhilikosi - elimnandi futhi okumnandi izithelo isagcine
Die isitokwe ngenxa Ukuchusha
Kuyini ukuvumelanisa ubudlelwane?
St Petersburg Academic Theatre kweLeningrad City Council: repertoire, incazelo kanye nabalingisi
U-Irina Lachina: ifilimu, i-biography nokuphila komuntu siqu we-actress (isithombe)
Ukuphuza isitsha-imbiza: izici, izinhlobo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza